Apple zụtara teknụzụ site na Omnifone, onye na-eweta egwu gụgharia | Esi m mac
Kemgbe ụlọ ọrụ Cupertino, California bidoro ọrụ egwu ya na-agagharị agagharị Apple Music na njedebe nke ọnwa Juun afọ gara aga, mbọ iji meziwanye ya ma n'ime ya na usoro nke onye ọrụ akwụsịbeghị. N'ezie, ọtụtụ nkatọ ndị a natara na-ezo aka na interface ya enweghị omume enyi dugara na mmezigharị zuru ezu na mbido nke iOS 10 na Septemba gara aga.
Mana n'ime, Apple emeela ka ụzọ Apple Music dịwanye mma site na ịkwalite "ọgụgụ isi" nke na-eme ka ọ dịrị ndị ọrụ mfe ịchọta egwu ha chọrọ ma ọ bụ chọpụta egwu ọhụrụ na ndị nka. Ndepụta ọkpụkpọ smart ọhụrụ, dabere na omume onye ọrụ, bụ ezigbo ihe atụ nke a. Mana ụlọ ọrụ ahụ maara na a ka nwere ọtụtụ ọrụ n'ihu ma ọ bụrụ na ha chọrọ n'ezie Apple Music ịghọ ọnụọgụ egwu egwu na-ebu ọnụ na-aga n'ihu Spotify. Ma ọ bụrụ na maka nke a, ị ga-azụta teknụzụ ndị ọzọ ma were ndị ọrụ sitere na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, mgbe ahụ ịzụrụ ma were ha n'ọrụ. Nke a bụ kpomkwem ihe ị mere na Omnifone.
Omnifone, nnweta nke ka na-enye ohere
Dabere na weebụsaịtị pụrụ iche n'ihe gbasara teknụzụ TechCrunch, naanị ọnwa ole na ole gara aga na Apple nwetara teknụzụ site na ikpo okwu Omnifone nke dabere na egwu igwe ojii ma ọ bụ egwu egwu. Ọzọkwa, kemgbe ahụ ụlọ ọrụ nke apụl bitten emeela ka ndị ọrụ ya bawanye ma were ọtụtụ ndị ọrụ Omnifone n'ọrụ ndị maara teknụzụ a nke dị ugbu a n'aka ha.
Asịrị mbụ banyere mmasị Apple nwere na Omnifone pụtara na Julaị gara aga, agbanyeghị, ọ bụ ugbu a ka enwetara nnweta ahụ.
Dịka a pụrụ ịhụ na profaịlụ dị iche iche nke netwọkụ mmekọrịta ọha na eze LinkedIN, ọ dịkarịa ala ndị ọrụ Omnifone iri na isii na-arụ ọrụ ugbu a maka Apple. Ha niile na-aga n'ihu na-eme nke a site na United Kingdom, ọkachasị na isi obodo ya, London. Iji mee nchọpụta a (nke a ga-abara gị uru maka nchọta n'ọdịnihu) o zuru ezu ịzapụta nsonaazụ na LinkedIN, guzobe Apple dị ka "ụlọ ọrụ ugbu a" na dị ka "Companylọ ọrụ gara aga» Omnifocus. Nsonaazụ a doro anya:
Offọdụ n'ime ndị ọrụ Omnifocus mbụ bụ ndị na-arụ ọrụ ugbu a maka Apple mgbe ekwuru na ha nwetara teknụzụ egwu igwe ojii
Ọtụtụ n'ime ndị ọrụ Omnifone bụbu ndị ọrụ ugbu a na-arụ ọrụ dị ka injinia ngwanrọ na Apple, ma eleghị anya na-elekwasị anya na mpaghara dịka iTunes na Apple Music. O doro anya ihe teknụzụ Apple zụtara n'aka Omnifone, mana isi TechCrunch kwenyere na E tinyeworị ụfọdụ n'ime ihe ndị a zụrụ na Apple Music na iTunes.
Tụkwasị na nke ahụ, isi mmalite ahụ na-enweghị onye kwuru na TechCrunch na-ekwu na Apple zụtara "teknụzụ ahọpụtara" site na Omnifone. Ugbu a, nke a abụghị ihe zuru ezu Apple ịzụta dị ka ogologo dị ka Pọtụfoliyo nke Omnifocus ga-anọgide na aka Omnifocus, na ọ bụghị Apple, mgbe niile dị ka ụdị nke enyere site na isi iyi a na TechCrunch.
N'ezie, a tụpụtara na Apple 'zụtara' ma ọ bụ 'eleghị anya' enwetara 'akụnụba Omnifone na ọnwa Julaị afọ a, ka akụkọ ndị Omnifone na-ahụ maka enweghị ego kwuru na a chọtara onye zụrụ akụkụ ụfọdụ nke ụlọ ọrụ ahụ maka nde dollar 10. Asịrị n'oge ahụ bụ na onye zụrụ ya bụ Apple. Agbanyeghị, akụkọ ndị ahụ na-eweghara akụkọ ahụ emeghị ngwa ngwa.
Mana ọ na - aga n’ihu naanị otu ọnwa ka e mesịrị, ọ dị ka ọ dịkarịa ala akụkụ ya ụfọdụ bụ eziokwu.
Omlọ ọrụ Omnifone mepụtara igwe ojii nke na-enye ike ọrụ MusicStation nke aka ya ma na-eje ozi dị ka ọkpụkpụ azụ maka ọrụ egwu dị iche iche malitere site na mmekọrịta dị iche iche na ụlọ ọrụ ekwentị, gụnyere ndị nrụpụta na ndị ọrụ dịka LG, Samsung., Vodafone, BlackBerry, Sony na ndị ọzọ.
Dịka ọmụmaatụ, Omnifone kwalitere ọrụ egwu egwu nke Samsung Milk ugbu a na ebe ụfọdụ ma na-ahụ maka inye nri site na ụlọ ọrụ otu aha, PonoMusic Store.
Maka oge, Apple ekwenyeghi ma obu gọnarị ozi a, ya mere anyị ka ga-atụle ya na ikuku.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Apple zụtara teknụzụ site na onye na-eweta egwu na-egwu egwu Omnifone